Shaki soo wajahay mustaqbalka Alexis Sanchez ee kooxda Arsenal – Gool FM
Shaki soo wajahay mustaqbalka Alexis Sanchez ee kooxda Arsenal
(London) 13 Nof 2016. Waxaa shaki soo wajahay waayaha Alexis Sanchez ee kooxaha Arsenal kaddib laacibka oo weli heshiis cusub u saxiixi la’ Gunners taa oo albaabada u fureysa kooxaha uu huguriga kaga jiro dhaliyahan.
Manchester City iyo Juventus ayaa labaduba isha ku haya xaalada Arsenal ee ku aadan saxiixa laacibkan sida ay sheegeyso Daily Mirror.
Dhaliyaha reer Chile ayaa wada hadalo kula jiray Gunners ee ku aadan heshiis cusub tan iyo bishii August laakiin saddex bilood kaddib wax la isla meel dhigay iyo heshiis la isla saxiixday toona ma jiraan.
Sidaa darteed waxaa laga yaabaa is mari waagaas inuu albaabada u furo Man City iyo Juve, kuwaa oo ku dagaalami kara dhaliyaha lagu qiimeeyay 50-ka milyan oo bound.
Ozil oo si maldahan u muujiyay inuu sii joogayo Arsenal
Arsenal iyo Liverpool oo kor ka ilaashanaya xaalada ka dhex taagan Man United iyo labadeeda daafac ee Smalling iyo Luke Shaw